Monday February 19, 2018 - 01:16:48 in Maqaallo by Halgan News
Wasiirka maal-gashiga Somaliland ayaa waxaa uu joogo magalada Dubia, waxuu warku nagu soo gaadhay in uu ku hawlan yahay sidii Somaliland loo maal-galin lahaa
, khasatan Tamarta (Energy), Beeraha iyo Kaluumaysiga. Haddaba waan soo dhawaynayaa in dalka maal gashi loo radiyo.
Waxa kale oo wiigan warku sheegayaa in Wasiirka Arimha dibada Dr. Sacad Cali Shire iyo safiirka Somaliland ee dalka Emiradku Bashe Cawil ay sameeyeen sharkada loogu magac daray "Somaliland Investment Company”, sharkadani oo ay xukuumada Somaliland uga wakiil noqon doonta maal gashiga caalamiga ah. Haddaba, mar labaad waan soo dhawaynayaa in ay shirkadani la abuuro, haddii ay sida u sheegan ay inaga cawinayso sidii dalka loo maal-gashan lahaa. Dalkeenu ma ah dal aqoonsi calamiya haysta, sida daraadeed waa loo bahan yahay hay’ad ama company maal-gashiga dalkeena iyo shirkada ama dalalka calamiga u fudidaya.
Waa in ay daraasadayno mashruucyada aynu doonayno in dalkeena ka hirgalino, qiimaha ku baxaya, inta aynu inagu maal-gashan karno. Sida uu madaxwaynuhu yidhi markii uu xukunka la wareegayay "Waa in aynaan calamka faro madhnaan ula tagin, ee aynu wax la nimadno”. Haddaba, haddii la inoo arko in ayna waxba haysan oo aynu gacmo madhan ula tagno calamka, isla markana dadka aynu u dirnaan noqdan dad aqoontoodu hoosayso, lahayna khibrad calamkana lagula dhaqmo. Waxay markaa inoo arki doonan dad quusa oo wax kasta laga saxeexi karo. Maalgashiga ama heshiiska ay kula galana waxaa uu noqon doona mid taa ka turjima. Marka waxa dalal badan oo Afrika ay ka yeelan ayay inaga yeeli doonan.